Zanu PF Inoti Sarudzo Ngadziitwe Gore Rino
Mumusangano weZanu-PF wePolitiburo neChitatu wakabuda nechisungo chekuti sarudzo dzemunyika dziitwe gore rino. Bato iri rinotiwo kunyorwa kwebumbiro idzva kinofanirwa kupedzwa mwedzi uno munyika moitwa sarudzo.
Musangano uyu unonzi waive nekukandirana makobvu nematete pazvinhu zvakawanda zvakatarisana nebato iri zvikuru munyaya dzesarudzo dziri kuitwa mumatunhu kana kuti District Cordinating Commitees, idzo dzinonzi nevakawanda dzapa kuti mubato muve nekusawirirana.
Vanoona nezvekufambiswa kwenyaya dzematongerwo ebato, VaWebster Shamu, vakapihwa masimba ekuti sarudzo dzidzokororwe mumatunhu anenge asina kuita sarudzo idzi nenzira kwayo.
Nyaya yekuti vamwe vari kuda chigaro chemutungamiri webato, VaRobert Mugabe, yakakandwa mugango bato rikasimbisa kuti hapana munhu anofanira kutaura nezvekuda kutungamira sezvo VaMugabe chete variiwo mutungamiri achamirira bato musarudzo.
Mutauriri webato, VaRugare Gumbo, vakaudza vatori venhau kuti bato ravo rakamira naVaMugabe avo vakasarudzwa nevanhu kuti vatungamire bato iri.
VaGumbo vakatiwo bato ravo harisi kuzodzokera shure panyaya yekuti sarudzo dziitwe munyika gore rino.
Asi gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vakaudza vatori venhau neChina kuti hurumende haina mari yekuita sarudzo, vachiti vari kuda kuita sarudzo ngavauye nemari yacho.
Vanongorora nyaya dzezvematongwerwo enyika, VaPsychology Mazivisa, uye vachishanda sechipangamazano mubazi rezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema vanoti sarudzo ndidzo dzinopedza makakatanwa muhurumende yemubatanidzwa.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemitemo, VaDewa Mavhinga, avo vanoshanda neCrisis in Zimbabwe Coalition, vanoti sarudzo hadzingaitwe pasina kuvandudzwa mitemo yesarudzo, pamwe nekuzadzisa zvinhu zvakatarwa nechibvumirano chezvematongerwo enyika.